किन आवाज निकाल्छन, सेक्स गरेको बेलामा महिलाले ?
महिलाले सेक्सका बेला एस, मोर प्लिज, स्टप, गो, लभ युलगायतका शब्द उच्चारण गर्ने गर्छन
१ असार ०७३ | 2016-06-15 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । महिलाहरु सम्भोगका बेला विशेष खालको आवाज निकाल्छन् । किन निकाल्छन् त आवाज ? यसबारे धेरै अनुसन्धानहरु भएका छन् । तर, वैज्ञानीक तथ्य हालसम्म आउन सकेको छैन ।